पढ्ने समय:5मिनेट तपाईं फेरि वर्ष को समय लगभग यसलाई विश्वास गर्न सक्छौं? यो वर्ष सबैभन्दा सुन्दर समय हो! साँच्चै जर्मनी मा सर्वश्रेष्ठ क्रिसमस बजार संग आत्मा मा प्राप्त! क्रिसमस हव्वाले सम्म लेट नोभेम्बर, सम्पूर्ण जर्मनी मा शहर वर्ग गुलजार छ…
पढ्ने समय:6मिनेट शान्तिपूर्ण र रमाइलो. दुई शब्दहरू जुन तपाईं आमाबाबुले बच्चाहरूको साथ तिनीहरूको छुट्टी यात्रा कथाहरू बताउँदा प्रयोग गर्ने सुन्नुहुन्न. त्यसैले, हामीले तपाईंलाई युरोपमा बच्चाहरूसँग ट्रेनमा यात्रा गर्नका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिने निर्णय गरेका छौं. त्यहाँ रेलहरूको बारेमा केहि छ जसले बच्चाहरूलाई शान्त बनाउँछ…